जग्गा र भवन खाली गर्न पत्रकार महासंघको पत्राचार – धौलागिरी खबर
जग्गा र भवन खाली गर्न पत्रकार महासंघको पत्राचार
धौलागिरी खबर	 २०७८ मंसिर १, बुधबार ०७:०३ गते मा प्रकाशित 145 0
बेनी । जग्गा र भवन खाली गरिदिन अनुरोध गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दी शाखाले मंगलबार बेनी नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ ।
शाखा अध्यक्ष प्रकाश पौडेलको नेतृत्वमा नगरपालिकामा पुगेको महासंघको टोलीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धोलकराज ढकाललाई पत्र बुझाएको हो । नगरपालिकाले पत्रकार महासंघको कार्यालय सञ्चालनका लागि बेनीको १४१९ कित्ता नम्बरको चार आना जग्गा बार्षिक रु. दश हजार भाडा तिर्नेगरी उपलब्ध गराएको थियो ।
बि.स. २०७६ मा नगरपालिकाले भाडामा दिएको जग्गामा रहेको भवनमा बस्दै आएका ब्यक्तिले नछाडेपछि मंगलबार बसेको शाखाको बैठकले खाली गरिदिन अनुरोध गर्दै पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । महासंघले भाडा तिर्दै आएको भवन प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन अनुरोध गरिएको शाखा अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो ।
प्रशासन र सुरक्षा निकायकै आँखा अगाडी खुल्ला राजनीतिमा आएको दलले सरकारी र ब्यक्तिगत जग्गा तथा भवन कब्जा गर्दा समेत मौन बसेका छन् ।